Maherifo momba ny fizahantany: Agnes Mucuha avy amin'ny fikambananan'ny mpitsangatsangana any Kenya
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maherifo momba ny fizahantany: Agnes Mucuha avy amin'ny fikambananan'ny mpitsangatsangana any Kenya
Agnes Mucuha no Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny dia any Kenya any Nairobi, ary izy dia maherifo amin'ny fizahantany ankehitriny ary nampiana www.heroes.travel .
Hoy izy eTurboNews androany: “Amim-panetren-tena no anoratako ny fanekena ny fanendrena ahy ho ao amin'ny Hall Iraisam-pirenena ho an'ny Maherifo momba ny fizahantany. Voninahitra lehibe ho ahy ny mahafantatra fa nahatsapa ho mendrika fankatoavana lehibe toy izany ny mpiara-miasa amiko mpiara-miasa amiko.
"Manolo-tena hanohy handray anjara biriky amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany aho amin'ny alàlan'ny fitarihana stratejika sy ny fifandraisan'ny mpiray antoka amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fampiroboroboana ny fanarenana ho an'ny fizahantany azo antoka.
"Ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia indostria matanjaka izay mifandray amin'ny sehatra maro amin'ny rojom-bidiny, mamorona asa ary manana fotoana betsaka ho an'ny mpampiasa vola ary mitondra fanantenana amin'ny fiainana maro izay misitraka mivantana na tsia ity indostria ity.
“Manantena fiaraha-miasa akaiky amin'ny fanarenana.travel iireo nitiatives ao amin'ny iraka ampiasaintsika hitrandraka ny teknolojia sy ny fanavaozana ho mpanentana amin'ny famerenana ity sehatra ity. ”
Notendren'i: Agnes Mucuha:
Josephine Kuria, Vondrona Travel Lordstown Ltd.: Ramatoa Agnes dia manana ny toetran'ny mpitarika tsara izay misy ny tsy fivadihana, ny fiaraha-miory, ny fanetren-tena, ny fitaomana ary ny fahatsapana tsara. Hainy ny mamaky olona ary mampifanaraka ny fomba fitantanana ilaina.
Stephen Mbatha, Emirates: Agnes dia tena nanampy betsaka tamin'ny fananganana fiaraha-miasa matanjaka niaraka tamin'ireo mpiantsehatra amin'ny indostria; Zava-dehibe ny manamarika fa nampifandray ny elanelana misy eo amin'ny minisiteran'ny fizahantany, ny maso ivoho ary ny zotram-piaramanidina izy. Izy dia nitondra firindrana ho an'ny Travel Indostria eto Kenya nandritra ny areti-mandringana taloha sy aorian'ny Post-COVID-19. Tokony hidera azy aho noho izy nandamina andiana webinarara nandritra ny areti-mandringana COVID-19 tao amin'ireo sehatra ireo dia naneho ny fepetra napetraka ny Airlines taorian'ny areti-mandringana; ny sasany amin'ireo tanjona dia efa ary tsy voafetra ho: • Ireo O & D manan-danja izay azon'ny Agents amidy mifototra amin'ny fandaharam-potoana ankehitriny izay manome fifandraisana amin'ny toerana alohan'ny 5 ora ary koa ao anatin'ny 8 ora. Zava-dehibe izany satria ny fironana amin'ny angon-drakitra ankehitriny dia mampiseho fahombiazana be amin'ny toeran-kaleha toy izany - ny fotoana fitetezam-paritra dia ahiana lehibe ho an'ny mpandeha • Fampahalalana momba ny protokolon'ny fitsangatsanganana vondrona. • Mifantoha amin'ny dia F / J amin'ny lafin-javatra COVID-19 izay nitarina ho an'ireo mpitsangatsangana ireo dia hanampy ny Agents amin'ny famelabelarana mitovy ny fizarana Corporate. • Ny vola fanampiana amin'ny valizy - ny fironana momba ny angon-drakitra dia nampiseho fanarenana matanjaka teo amin'ny sehatry ny mpivarotra, sy ireo USP manan-danja indrindra amin'ity fizarana ity? Politika famerenam-bola sy torolàlana momba ny vidin'ny vidin'ny post-COVID-19.
Manendry an'i Agnes ho ao amin'ny Hall Iraisam-pirenena ho an'ny Maherifo momba ny fizahantany aho; mendrika izany izy.
Esther Mynyiri, Kenyatta University: Soso-kevitra am-pitiavana aho Rtoa Agnes Mucuha ho Hall Iraisam-pirenena ho an'ny Maherifo momba ny fizahantany.
Lenny Malasi, Oganda Airlines
Moses Omusamiah: Agnes dia nampiseho fitarihana miavaka tao amin'ny KATA hatramin'ny nandraisany ny toeran'ny fikambanana. Izahay amin'ny maha-indostria antsika dia miaina fampandraisana andraikitra mavitrika sy miverimberina indray eo ambany fitarihany. Tena nandeha lavitra tokoa io mba hahazoana antoka fa manana hery ampy ny Indostrian'ny Indostria ary noho izany dia manao an'i Kenya ho tsena mavitrika. Manoro hevitra mafy an'i Agnes Mucuha aho amin'ity loka ity.
Ny mari-pankasitrahana ny Hero Hero dia fanekena amin'ny alàlan'ny fanarenana.travel ary World Tourism United eo ambany fitarihan'ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha; avy amin'i Dr. Peter Tarlow, Safer Tourism; ary avy amin'i Juergen Steinmetz, tale jeneralin'ny Travel News Group.
Juergen Steinmetz dia nilaza hoe: "Faly izahay mahita an'i Agnes izay naneho tena fitarihana tena nanao ity dingana fanampiny ity nandritra ny toe-javatra sarotra izay ezahan'ny sehatra anay."
Raha mila fanazavana fanampiny sy fanendrena dia mankanesa any www.heroes.travel
Ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany Seychelles dia mandefa ny fizahan-tany Wi